Archive du 20170616
Claudine Razaimamonjy Nafindra eny Manjakandriana
Tsy ao amin’ny fonjaben’Antanimora intsony i Claudine Razaimamonjy fa nafindra toerana. Omaly tamin’ny 1ora sy sasany tolakandro teo no niala teny an-toerana ary nentina any Manjakandriana ny tenany.
Tsy fananganan-tsaina Fihetsika fanairana ny fanjakana
Vitsy ny tokantrano Malagasy manangan-tsaina amin’izao ankatoky ny fetim-pirenena izao.
Olom-pirenena ankehitriny Te hampandini-tena mpitondra, hoy VaMi
Te hampandini-tena ny mpitondra ankehitriny ireo olom-pirenena tsy manangan-tsaina, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko VAMI (Vahoaka miray), Vakiniadiana Gaby, raha naneho ny heviny mikasika ny antony maha vitsy ireo sainam-pirenena mitsangana isan-tokantrano amin’izao fotoana izao.
Lalao Ravalomanana Misy mampijabaka
Maro ireo trangan-javatra miseho eto Antananarivo, izay manaratsy endrika ny fomba fitantanana ao amin'ny tanànan'Antananarivo, misy amin'izy ireny no fanaratsiana miendrika politika, kanefa koa dia misy dia misy ny tranga tena hita porofo fa vokatry ny tandrametaka na fanaparam-pahefana ataon'ireo tandapa sasany izay mandoto ny anaran'ny Ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana.
Didim-pitsarana Efa azo lavina sy tsy tanterahina?
Efa zary fomba amam-panao raiki-tapisaka eto amin’ny firenena ity tsy fanatanterahana didim-pitsarana ity.
Hetsika Olom-Pirenena Entanina Hiady amin’ny kolikoly
Nampahafantarina omaly alakamisy 15 jona tetsy amin’ny American center Tanjombato ny fitsanganan’ny fikambanana Hetsika Olom-Pirenena Entanina (H.O.P.E). Ireo tanora mpitarika miisa 46 ao amin’ny andiany faha-12 an’ny Centre d’Etudes Diplomatiques et Strategiques de Madagascar (C.E.D.S) raha ny fanazavan’ny masoivoho amerikanina miasa eto amintsika, Robert Yamate, izay sady mpiahy ny andiany no nanapa-kevitra hamorona azy ity.
Lavitry ny ezaka
Raha toa ka misy telo ny dingana atao rehefa hamadika asa ny vina iray napetraka, izany hoe fohy ezaka sy antenantenan’ezaka ary lavitra ezaka dia mahakivy ny maro ihany ny mahita ny
Drafi-panarenana ny fanabeazana Mihatra amin’ny 2018-2022
Tontosa omaly alakamisy 15 jona teo ambany fiahian’ny praiminisitra Mahafaly Solondrasana Olivier teny amin’ny lapam-panjakana Mahazoarivo ny fanaovan-tsonia ny drafi-panarenana momba ny fanabeazana na ny PSE.
Olona nanao heloka tsotsotra Hovotsoran’ny polisy aloha
Araka ny voafaritry ny lalàna dia 48 ora ihany ny fe-potoana hahafahana mitazona olona eny amin’ny biraon’ny mpitandro ny filaminana, ka na havotsotra izy ireny na hatolotra ny fitsarana. Amin’izao fotoana izao dia misy ilay fitokonan’ny mpiraki-draharahan’ny fitsarana,
Sekolin’ny zandarimariam-pirenena Ambositra Tafapetraka ny kaomandy vaovao
Ny 10 mey 2017 lasa teo, nandritra ny filankevitry ny minisitra no nanendrena ny kolonely Bama Marima kaomandin’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena Ambositra, raha lefitra faharoa ny komandin’ny fari-piadididan’ny zandarimariam-pirenena Toliara izy teo aloha.
Fiara nitondrana rongony 20 gony Manamboninahitra am-perinasa no tompony
Mipoitra tsikelikely ny marina momba an’ilay fiara tsy mataho-dalana marika Harbody nahasaronana rongony 20 gony tany Ihosy ny marainan’ny alarobia 14 jona teo.